ရရှိနိုင် Mageia2Alpha1 | Linux မှ
ရရှိနိုင် Mageia2Alpha1
ဒီ site ၏ပထမရက်သတ္တပတ်များတွင် Mageia2မှယူဆောင်လာနိုင်သောအပြောင်းအလဲများ၊ ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအချိန်ဇယားနှင့်အခြားအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်ကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ Mageia2(ပြက္ခဒိန်၊ အထောက်အပံ့နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ)
El Mageia1 အားဖြင့် Alpha2 ယခုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ၊ သင်သူတို့ကိုတရား ၀ င်မှန်များပေါ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ http://mirrors.mageia.org/
ဒါပေမယ့် ... အခုဒီစီဒီ / ဒီဒီမှာဘာအသစ်တွေရှိသလဲ။
၏ရပ်ရွာများအတွက်ကောင်းသောသတင်း Mageia, နှင့်အစဉ်အဆက်ကြိုက်ခဲ့သည် (သို့မဟုတ်ကြိုက်ဆဲ) Mandriva.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » ရရှိနိုင် Mageia2Alpha1
ဟားဟား Mageia ကိုမင်းဆေးမင်ကြောင်တောင်မမြင်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်
ငါပထမ alpha version တစ်ခုမှ စ၍ ထပ်မံ၍ မကြိုးစားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကြိုက်ခဲ့သည်၊ Mandriva တွင်ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီနှင့်ကော်ပီမိတ္တူများမရှိပါ။
$ Afari နှင့် MacO $ ?? .WTF? ဒါပေမယ့်ငါ Android နဲ့ default browser ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်
ပုံမှန် browser ဆိုတာဘာလဲ။
အင်တာနက်ဆိုတာဟုတ်လားမသိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတူညီတဲ့သင်္ကေတရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ဆင်တူတယ်။
မှတ်ချက်များအတွက် distro နှင့် browser ကိုပြသသော plugin ကိုကျွန်ုပ်တို့မှပြုလုပ်သည်မဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Safari တွင် UserAgent ပါ ၀ င်သည့်အခါ၎င်းသည် MacOS X ဟုယူဆသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ...
နှင့် ... elav ရဲ့မေးခွန်းနှင့်အတူအဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က Arch သည်သူအသုံးပြုခဲ့သည့်အချိန်ကာလကိုသူချစ်မြတ်နိုး။ ကာကွယ်ခဲ့သောဖြန့်ဖြူးမှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့သော KZKGGaara မှလွဲ၍ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမှေးမှိန်သွားခြင်းမရှိပါ။
haha ကောင်းပြီ၊ မင်းဘလော့ဂ်အတွက်ငါယူခဲ့တဲ့မီးတောက်တစ်ချောင်းနဲ့ငါ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ငါက 20Gb porn နဲ့ hahahahaha စတဲ့အရာအားလုံးကငါ့ရဲ့မှတ်ချက်တွေကြောင့်မကောင်းဘူး။
ကောင်းပြီ၊ ၎င်းသည် Mandriva သို့သွားသော်လည်းနောက်ဆုံး Mandriva ကသူတို့ကိုသတ်ရန်ဖြစ်သည်၊
ငါထပ်တလဲလဲ ... လက်ရှိ Ubuntu ၏လမ်းကိုငါမကြိုက်ဘူး။
ငါ Ubuntu ကို ၉.၀၄ အထိကာကွယ်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ၉.၁၀ ပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိ Ubuntu သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်သွားနှင့်လက်သည်းကိုကာကွယ်သော distro မဟုတ်ပါ။
Ubuntu ကကျွန်တော့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော်တော်ကောင်းပုံရလို့လား၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လား။ ငါဒီ distro ကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်ရမလား။
Renegade !!! ငါမင်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့မင်းကို ၁း၁၊ Turbo နဲ့ Scooter ကိုငါပို့မယ် ..
Xubuntu (သို့) LMDE Xfce? ဘယ်ဟာကိုရွေးရမလဲ ...
MyPaint 1.0.0 သည်အလင်းကိုမြင်သည်